बच्छिका नागरिकलाई डाेकाेमा पानी बाेक्न अझैसम्म छुटेन………. – Nilo Aakash
बच्छिका नागरिकलाई डाेकाेमा पानी बाेक्न अझैसम्म छुटेन……….
अमर कार्की ७ कार्तिक २०७७, शुक्रबार १७:१०
बर्षाै देखि पिछडिएको पञ्चपुरी १० काे बच्छि र दमार गाउँ स्थानीय निकाय हुदा पनि समस्या जस्ताकाे तस्तै रहेकाे छ । करिव १ सय ५० भन्दा बढि घरधुरी रहेकाे बच्छि र दमारमा पिउने पानी नहुदा नागरिक हरु स्थानीय खाेला र भेरी काे पानी पिउन बाध्य भएका छन । बर्षातकाे समयमा मुल फुट्ने र नजिकै पानी हुने यस क्षेत्रमा अहिले मुहान सुक्न थालेपछि फेरि खाेला र भेरी धाउनुपर्ने देखिएकाे छ । २०६८ सालमा तत्कालीन क्षेत्रीय खानेपानी तथा सुपरिवेक्षण कार्यालय बाट सर्भे गरेपछि खानेपानी काे सुबिधा पाउने अाश बाेकेका नागरिक काे १० बर्ष अाशै अाशमा बितेकाे छ । कुमघाट खाेलाकाे मुहान बाट ल्याएकाे पानी गाउँ नजिकै काे ट्याङ्की मा अाएपनि दाेस्राे ट्याङ्की मा अहिले सम्म पुगेको छैन ।
सडक संजालले भर्खरै जाेडिएकाे बच्छी र दमार गाउका नागरिक हरु स्थानीय निकायलाई पानी पुर्‍याउन माग समेत गरेका छन । स्थानीय अगुवा कृष्णबहादुर खत्रीले स्थानीय जनप्रतिनिधि लाई समस्या पुर्णरुपमा जानकारी गराएकाे र काम गर्ने अाश्वासन मात्रै दिने गरेकाे गुनासाे गरेका छन । खानेपानि नभएकै कारण बिद्यालयका बिद्यार्थी र गाउघर स्वास्थ्य ईकाईमा समेत समस्या हुने गरेकाे खत्रीले बताए । अहिले पनि स्थानीय नागरिक १ किलोमिटर टाढा भेरी नदिकाे पानी बाेकेर पिउने गरेका छन ।
वडा नं १० का अध्यक्ष हरिप्रसाद ढकालले खानेपानी का लागि यस बर्ष ५ लाख कर्णाली प्रदेश सरकार र २ लाख जिल्ला समन्वय समिति संग पहल गरेर बजेट छुट्याइएको र यसै बर्ष दमार र बच्छि गाउमा खानेपानी पुर्‍याउने लक्ष्य रहेकाे बताउनुभएको छ । पञ्चपुरी नगरपालिका बाट ७ सय मिटर पाईप उपलब्ध गराएकाे र बिद्यालयमा खानेपानी पुर्‍याउन लागिएको समेत जानकारी दिनुभयाे । ढकालले प्रत्येक घरमा खानेपानी पुर्‍याउन लगानी धेरै लाग्ने भएको हुदा तत्काल समुदाय सम्म पानी पुर्‍याउन सके पनि समुदायलाई राहत हुने बताउनुभयो ।